Ukuchithwa kweCarbide Carbide UkuCima kwiZicelo zoLwazi lweNsimbi
Umenzi ophambili wezixhobo zokusika ze-CBN kunye ne-PCD ufuna ukwandisa imveliso yazo ngo- Joliseba ubushushu on indawo encinci kakhulu ukuze ndi ukunciphisa ukulahleka kobushushu kunye nokuphucula a Ukurhawuka kwekhabhayithi inkqubo.
Umthengi unikeze unxantathu womzimba wentsimbi, kwicala ngalinye ~ 16.5 mm (0.65 intshi). Inkqubo ye- Ukuchithwa kwe-brazing carbide kufuneka yenziwe nge-3 mm (i-intshi eyi-0.11) unxantathu olinganayo kwicala. Indawo yokufudumeza yesixhobo sentsimbi yomzimba yi-43 mm (1.69 intshi) OD x 25 mm (0.98 intshi) ubude. Inkqubo yokufudumeza i-DW-UHF-6kW-II isetyenziselwe ukufikelela kwi-1600 ° F (870 ° C) kwaye igqibe inkqubo kwimizuzwana eyi-8. Ikhoyili eyenzelwe ngokwesiko igxile kubushushu kwindawo yokucoca i-carbide kunye nexesha lokuncitshiswa.
I-DW-UHF-6kW-II inkqubo yokufudumeza ngaphakathi kunye nokwenza ngokwezifiso i-couction brazing coil yayisetyenziselwa ukulungelelanisa iimfuno zenkqubo.
ishishini: izixhobo & Izixhobo
iindidi Teknoloji tags ukugquma, i-carbide, Ukurhola iKhabhayithi yeCarbide, izixhobo zokusika i-carbide, ukurhawula ukusikwa, izixhobo zokusika, hf ukujonga, ukukhangela ibhondi, Ukuchithwa kweCarbide Carbide, I-induction brazing yokusika intsimbi, izixhobo zokusika zobhedu Post yokukhangela